Windows Media Player 64 bit na-aghọ ọhụrụ oke n'etiti ndị mmadụ si n'akụkụ nile nke ụwa. E nwere ọtụtụ ihe maka mmasị a Otú ọ dị ka nwere ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na Windows Media Player 32 bit na-achọta ya a bit adaba.
Windows Media Player bụ ndabere ọdịyo na video ọkpụkpọ awa site windows arụ ọrụ usoro. Mgbe ị na-amụba okpukpu abụọ pịa na Windows Media Player icon, ndabara, ọ ga-emepe 32 bit version naanị. Ndị mmadụ na e-eji nke a 32 bit version si a ogologo oge ugbu a na-achọta ya ukwuu adaba. Otú ọ dị ọhụrụ 64 bit version nke Windows Media Player dị mma na ukwuu oru oma mgbe tụnyere 32 bit version. Mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-adịghị chọta ukwuu dị iche, 64 bit version bụ dịtụ ngwa ngwa mgbe tụnyere ya ụzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eji Windows Media Player 64 bit version, ị pụrụ ịtụ anya ngwa ngwa syncing na ọkụ omume. Ị ga-enwe ike a Windows Media Player 64 bit version icon n'ụzọ doro anya na ọ bụrụ na ị chọrọ iji nke a version naanị. Higher arụmọrụ na ngwa ngwa omume oge bụ isi mere o ji na-họọrọ n'elu 32 bit version.
Nkebi nke 1: Olee otú iji chọpụta ma ọ bụrụ na windows bụ 32 bit ma ọ bụ 64 bit
Nkebi nke 2: mgba ọkụ, mgbanwe ma ọ bụ ka 64-bit Windows Media Player 11 na Windows Vista x64 ka ndabere
Nkebi nke 3: Top 3 codecs maka Windows Media Player 64 bit
On Windows 8, 8.1 na 7
Ị nwere ike nweta azịza nke ajụjụ a dị nnọọ ole na ole otu clicks. Maka Windows 7, 8 na 8.1, usoro maka achọta si na version anọgide n'otu. Ị dị nnọọ ga-eso ole na ole mfe nzọụkwụ nke maara ma na ị na-arụ ọrụ na 32 bit version ma ọ bụ 64 bit version gị sistemụ. Lee ndị 3 nzọụkwụ ịmara bit version na Windows 7, 8 na 8.1.
Nzọụkwụ 1: Mepee akara panel.
Nzọụkwụ 2: N'okpuru usoro na nche ngalaba, ị nwere ike ịlele bit version gị sistemụ na-agba ọsọ na.
Ọ bụrụ na "Omuma View" nke akara panel na-nyeere, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mfe ịhụ bit version n'okpuru "usoro ụdị".
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ma gị windows vista sistemụ bụ 32 bit ma ọ bụ 64 bit, mgbe ahụ, eso ndị a:
Nzọụkwụ 1: Mepee akara panel site na mmalite menu.
Nzọụkwụ 2:-ahọrọ "usoro na mmezi" njikọ.
Nzọụkwụ 3: Na ọhụrụ "usoro na mmezi" window, họrọ usoro akara ngosi.
Nzọụkwụ 4: Lee maka usoro ụdị na mpaghara ebe a na i nwere ike mfe ịhụ ma gị sistemụ bụ na-akwado 32 bit ma ọ bụ 64 bit.
Ịchọpụta na version gị sistemụ nwere ike ịbụ na ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji wụnye na ịhọrọ ụzọ ziri ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta ma gị windows XP sistemụ dabeere 32 bit ma ọ bụ 64 bit, mgbe ahụ, na-eso ndị dị mfe nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: Mepee akara panel site ná mmalite menu.
Nzọụkwụ 2: Mepee "arụmọrụ na mmezi" njikọ.
Nzọụkwụ 3: Pịa na usoro icon ebe ị ga-usoro Njirimara.
Nzọụkwụ 4: The usoro Njirimara window ga nwere niile version ozi metụtara nke gị usoro. N'ihi na Windows XP, Windows XP Professional version pụtara 32 bit na Windows XP Professional x64 Edition pụtara 64 bit.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows Vista 64-bit, mgbe ahụ, Windows Media Player 32 bit ga-ndabere gị Windows Media Player version. Otú ọ dị, i nwere ike ịgbanwee gaa na 64 bit version nke Windows Media Player nnọọ mfe na-emekwa ka ọ dị ka ndabere gị version dị nnọọ site na-esonụ a ole na ole dị mfe nzọụkwụ. Ịmafe 64 bit version nke Windows Media Player dịkwa mkpa n'ihi ọtụtụ ndakọrịta mbipụta.
Biko eso ndị a ka 64 bit Windows Media Player 11 ka ndabere na Windows Vista:
Nzọụkwụ 1: Mepee iwu ozugbo.
Nzọụkwụ 2: Ụdị "unregmp2 / SwapTo: 64" ke iwu ozugbo na pịa Tinye bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3: The regedit interface ga-apụta. Na nke a interface, pịnye esonụ ụzọ:
HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SOFTWARE \_ Microsoft \_ Windows \_ CurrentVersion \_ App Ụzọ \_ wmplayer.exe
Nzọụkwụ 4: Na ndekọ edit interface, họrọ "ndabere" na nri pịa ya anya iji chọta gbanwee nhọrọ. Ị ga-ahụ na ndabara, a 32 bit version nke Windows Media Player họrọ.
Nzọụkwụ 5: Gbanwee faịlụ mkpakọrịta site na iji kọmputa ede na-esonụ:% ProgramFiles% \_ Windows Media Player \_ wmplayer.exe.
Nzọụkwụ 6: Na n'elu interface, pịa "OK" na-anabata mgbanwe.
Nzọụkwụ 7: The ikpeazụ ndekọ kwesịrị anya dị ka ndị a n'ihi na 64 bit windows media ọkpụkpọ.
Media Player codec mkpọ bụ a bara uru 64 bit codec maka Windows Media Player nke-enye gị na-egwu a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ ụdị ọdịyo na video faịlụ.
Mmepụta: Media ọkpụkpọ codec mkpọ
1: Enye gị na-egwu nta ọ bụla audio / video faịlụ na gị windows media ọkpụkpọ.
2:-enyere na-egwuri egwu ezoro ezo audio / video faịlụ dị ka mma.
3: Complete ohere ịhọrọ mmepụta sitere na site 2.0 ọwa 7.1 ọwa.
4:-enye gị ohere encode faịlụ na DivX na ndị ọzọ na formats.
2. Windows dị mkpa Media Codec Pack
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke faịlụ na gị Windows Media Player gụnyere Blu-ray, mgbe ahụ, ibudata windows dị mkpa media codec mkpọ. Nke a codec bụ kpam kpam free ibudata na ga-enye gị a ọnụ ọgụgụ nke magburu onwe atụmatụ.
Download njikọ: http://download.cnet.com/Windows-Essentials-Media-Codec-Pack/3000-13632_4-10662709.html.
1: ọrụ enyi na enyi interface.
2:-agụnye nkwado nke fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke ọdịyo / video faịlụ.
3. MP3 Codec maka Windows Media Player
Tọghata ọ bụla faịlụ n'ime MP3 na ọkụ dị ka kwa gị mma iji windows media ọkpụkpọ.
Download njikọ: http://download.cnet.com/mp3-codec-for-Windows-Media-Player/3000-2169_4-10630559.html.
1: dọkapụ ọ bụla faịlụ n'ime ihe MP3 format na ọkụ ya.
2: Nịm nlele ọnụego na àgwà nke nke pụrụ ịkpata.
> Resource> WMP> 3 Atụmatụ banyere Windows Media Player 64 bit